Mpianatra Malayziana mifampizara lesona mampiasa fitaovana ankihy hampiroboroboana fiteny indizeny · Global Voices teny Malagasy
Hita an-danonana ny fifaninanana afisy, fianarana fitantarana, fampianarana ary fampisehoana an-kira
Voadika ny 27 Oktobra 2021 5:45 GMT
Saripika nandritra ny dihy nentin-drazana ao Sarawak, Malayzia. Photo avy amin'i Lan Rasso via Flickr, (CC BY-NC-ND 2.0)
Nikarakara webinar hampiroboroboana ny fiteny vazimba ao Malayzia ny vondrona mpianatra avy amin'ny Universiti Teknologi Petronas ao. Niantsafa tamin'izy ireo ny Global Voices amin'ny fomba ampiasan-dry zareo araka izay tratra ireo sehatra ankihy amin'ny famoahana ny lanonana sy fampielezana fampahafantarana momba ny filana fiarovana ny fitenim-bazimba ao amin'ny firenena.
Mandrafitra ny 13,8 ny mponina Malayziana ny vahoaka vazimba. Miisa 137 ny fiteny vazimba ao amin'ny firenena.
Ny fanjakana roa ahitana vazimba betsaka indrindra dia ny ao Sarawak sy ny ao Sabah, izay samy miorina ao Malayzia Atsinanana. Ny fiteny vazimba be mpiresaka indrindra ao Malayzia Atsinanana dia ny Kadazandusun (Sabah) sy ny Iban (Sarawak).
Nanamarika ny mpianatra fa Malayziana vitsy dia vitsy no mba te-hianatra fiteny vazimba:
Based on observation, many indigenous groups, especially the youth, are leaving their hometown (kampung in Malay) for more urban settings, where more opportunities are available. They also are learning more commonly-used languages such as Chinese, outside of the mandatory Malay and English languages in school curriculums. However, the reverse situation of this phenomenon is almost unheard of. There are fewer Malays, Chinese or Indians who are seeking to learn indigenous languages at a conversational level.
Raha jerena avy amin'ny fandinihana, maro ireo vondrona vazimba, indrindra ny tanora, no mandao ny tanindrazany (kampung amin'ny teny Malay) handeha amin'ny tanàna lehibe kokoa, izay ahafahana manao zavatra bebe kokoa. Mianatra ireo fiteny be mpampiasa kokoa izy toy ny shinoa ankoatra ny tsy maintsy ianarana teny Malay sy anglisy any an-tsekoly. Na izany aza, dia toa tsy re mihitsy ny toe-javatra mifamaly amin'izany firohotana izany. Mihavitsy ny Malay, Shinoa na Indiana no te-hianatra fiteny vazimba amin'ny ambaratonga ifampiresahana.
Notondroin-dry zareo ihany koa ny fiantraikan'ny valan'aretina tao anatin'ny ezaky ny vondrona isan-karazany hampiroborobo ny fiteny indizeny:
The COVID-19 pandemic has also affected the progress of many of these organizations in their efforts to promote the indigenous languages of Malaysia. This is because for some, all their in-person events had to be cancelled, their source of income was cut, and they had to adapt to using digital tools to continue their efforts in the internet space.
Niantraika tamin'ny fandrosoan'ny fikambanana maro amin'ny ezaka ataon-dry zareo hampiroborobo ny fiteny vazimba ao Malayzia ny valan'aretina COVID-19. Nitranga izany satria ho an'ny sasany, tsy maintsy nofoanana ireo lanonana mila fifanatrehana mivantana, tapaka ny fidiram-bolany, ary tsy maintsy maka volontany ry zareo amin'ny fampiasana fitaovana ankihy hanohizana ny ezaka ataon-dry zareo ato amin'ny habaka aterineto.
Manantena ny mpianatra fa amin'ny alalan'ny webinar nomena ny lohahevitra “Promoting Indigenous Languages of Malaysia” na PILM (Fampiroboroboana ny Fiteny Vazimban'i Malayzia), dia ho afa-manaitra ny mpianatra namany ho liana amin'ny maha-zavadehibe ny fianarana fiteny vazimba ry zareo.
Notontosaina tamin'ny 18 sy 19 septambra ny webinar ary ahitana resadresaka, fotoam-panabeazana, atrikasa fitantarana, ary fampisehoana (hira sy antsa). Iray amin'ny nandaha-teny i Eddie Avila, talen'ny Rising Voices, izay niresaka “Fikatrohana Ankihy Fiteny Vazimba sy ny Taompolon'ny Fiteny Vazimba 2022-2032 hoavy.”
Namoaka fifaninanankira sy afisy ihany koa ny ekipa nikarakara ny PILM hampisy fahalianana sy hanintona olona bebe kokoa hanatrika ny webinar. Manodidina ny 29 tao ho eo ny isan'ireo nanatitra (afisy na hira) ifaninanana.
A post shared by PILM (@pilmproject)
Nohazavain-dry zareo ny fomba nihaikàn'ny fifaninanana afisy ny mpianatra hieritreritra ny anjara toeran'ny fiteny vazimba amin'ny famolavolana ny kolontsaina sy tantaran'ny firenena:
Students have the opportunity to explore, reflect and scrutinize the functions and roles of indigenous languages in society and to the indigenous communities. For example, in various designs, students were successful in articulating the importance of indigenous languages and the fact that these languages must be preserved and conserved for a better and harmonious Malaysia.
Manana hirika ny mpianatra hanavatsava, hieritreritra ary hamakafaka ny fomba fiasa sy ny anjara asan'ny fiteny vazimba ao amin'ny fiarahamonina sy ao amin'ny vondrom-piarahamonina vazimba. Ohatra, amin'ireo haiendrika isankarazany, nahombiazana ny mpianatra amin'ny fitanisana ny mahazavadehibe ny fiteny vazimba sy ny zavamisy fa tsy maintsy kolokoloina sy tehirizina ireny fiteny vazimba ireny hampijoro an'i Malayzia tsara sy mirindra kokoa.
Nankasitrahan'ny vondrona ihany koa ny fandraisana anjara fifaninanan-kira avy amin'ny mpianatra tsy vazimba:
It is interesting to note that most of the students who participated in this singing competition were mostly non-indigenous students who shown a deep appreciation of indigenous music and the languages. This is a positive sign that indigenous music can be appreciated, not just by indigenous speakers themselves, but by non-indigenous as well.
Mahaliana ny mahamarika fa mpianatra tsy vazimba izay naneho fandinihana lalina ny hira sy ny fiteny vazimba ny ankamaroan'ireo mpianatra nandray anjara tamin'ny fifaninanan-kira. Famantarana tsara (miabo) izany fa azo ankafizin'ny vazimba sy ny tsy vazimba ihany koa ny hira vazimba.
Nosoritan'ny mpandray anjara ny maha-kitro ifaharana ny fanaovana fikarohana bebe kokoa amin'ny fanamafisana orina ny fanentanana hampiroboroboana ny fiteny vazimba:
In the preparations for the event, we have learnt that a lot of research has to be done to ensure that the information we put out is as accurate as possible. This involved looking deep into research journals and asking those who were from the culture themselves.
Teo am-pikarakarana ny lanonana, lesona azonay fa ilaina ny manao fikarohana be dia be hiantohana fa marina araka izay azo atao ny torohay apetrakay. Tafiditra amin'izany ny mijery lalina amin'ireo gazetim-pikarohana sy manontany ireo avy amin'ilay kolontsaina ihany koa.
Azia Atsinanana2 andro izay